Somaliland: Muj" Cali Gurey Oo Faafahin Ka Bixiyey Hadal Odhah Dheer "Wadadii Cadayd Cagta Saartayee Ku Caraabiyo" - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Muj” Cali Gurey Oo Faafahin Ka Bixiyey Hadal Odhah Dheer “Wadadii...
Mujaahid Cali Gurey Oo Faafihin ka bixiyey hadalo uu hore ugu tuuray bahda xukuumada u ka tirsan yahay aya waxa oo shaciyey sidan oo u soo dhigay baraha bulshada barta fbgiisa
WADADII CADAYD CAGTA SAARTAYEE KU CARAABIYOO
Wax kasta uu Cali gurey yidhi waxa yidhi Caligurey goor iyo xaalad uu joogay ee Ilaahay ma odhanin. Taasi maalinteedii iyo xaaladeedii bay ahayd UCID oo mucaarid ah oo dagaal qadhaadh ku jiray baan ahaa. Maanta waa maalin kale waayihii shalay joogay maanta ma joogaan. Musharixii aan maalintaa taageersanaa ayaaba Kulmiye ku biiray dantiisa iyo mustaqbalkiisa siyaasaddana u arkay inay ku jirto. Anigu dan shakhsi ah oo siyaasadeed ma lihi waxa aan wax ku kala doortaana maaha dan shakhsi ama dan gaar ah oo qofeed ama reer ama kooxeed. Nimcada ugu wayn ee Ilaahay uu gaarka u siiyay dadku waa Caqliga maalinta qiyaamahana Ilaahay wuu waydiin doona qof kasta oo wuxu yidhi(WA-LA TUSALUNNA YOMA IDIN CANI NACIIM). Rasuulkeenuna NNKH eh waxa laga soo weriyay inu: wax waliba wuxu leeyahay aalad aaladda basharkuna waa caqliga( INNA LI KULI SHAYIN AALAH WA AALATUL BASHAR AL-CAQL).
Hadaba Caligurey maanta kii shalay ee mucaaridka ahaa ee Musharaxii uu taageerayay iyo xisbigiisii lagu soo duulay ee difaacayay maaha.Maanta cid uu la dagaalamayo iyo wax aan danta guud ee la wada leeyahay ahayn uu difaacayaana ma jirto. Dadka marka ay wax ka dhexeeyaan way isku qaban karaan af daayo gacan ka hadal ayaaba la gaadhaa. Lakiin in la isu tanaasulo oo dhinac tanaasulo oo Ilaahay ku hadho anigu ceeb uma arko waayo waxan ahay nin waayaha aduun wax badan soo maray wax kasta oon nolosha soo marayna marka aan ugu liito waxan ka bartaa cashar. Taana aniga xagayga guul darro uma qaato ceebna uma arko waayo marka horeba muraad yar oo gaar ah kamaan lahayn.
Mucaaridka maantu waa fulay waana dad ducafo ah oo aan kaalintii aan kaga jiray mucaarika markii aan mucaaridka ahaa buuxin karin. Waxa keliya ee hub u noqday wixii Caligurey berigii uu mucaaridka ahaa yidhi oo sax iyo qalad labadaba noqon kara. Sababo dhawr ah ayaa ku kelifaya ta ugu waynina waxay tahay ma hayaan wax ay dadka u sheegi karaan oo ay taageeradooda ku kasban karaan. Dhinaca kale waxay arkayaan oy is diidsiinayaan xaqiiqada hortooda taal oo ah inu Muuse Biixi ka soo mudh-baxay karin kasta oo cidhiidhyoon hadana cagta saaray wadadii Qasriga Madaxtooyada oon wax kale daayoo qodaxna lahayn, waayo ma jiro oo may keensanin musharax la tartami kara oo kaga adkaan kara doorashada. Caligureyna hadii uu ku qanacsan yahay uu arkayo musharax uu aaminsan yahay inu Muuse Biixi u dhaami karo Somaliland beri hore ayuu taageeri lahaa lakiin ma arko mana jiro. Cid ula timi oo ku qancisay uu ka diidayna ma jirto mana ahaa geed meel ka baxay ee waa qof hadii gurigii uu yaalay ku xumaado iskaga guuri kara. Wax intaa ka badan uu sameeyayna ma jirto xaqna wuu u leeyahay ee waa kuma ninka hooyo dhashay ee ka horjoogsan karaa
Somaliland: “Innaga Maanta Taladeennu Waa Wan Weyn Subag Ku Shub, ILAAHAY Ha Lagaga Yaabo Dadku Wuu Soo Ooteye”
Somaliland: Hoggaanka Xisbiga KULMIYE oo ka Qaybgalay Wanqasha Degmada cusub ee Gumburaha
Somaliland: Murrashaxa Madaxweynaha WADDANI Oo Si Adag U Cambaareeyey Xadhiga Lagu La Kacay Siyaasiyiin Ka Tirsan Xisbiga WADDANI
SOMALILAND:Madaxweyne Siilaanyo Oo Dhaqan-geliyay Xeerka Komishanka AIDS-ka